आफैले बनाएको मोटरसाइकल चलाएर कार्यालय जाने “प्रहरी” ! – MeroOnline Khabar
प्रहरी प्रधान कार्यालयको विद्युत् शाखामा कार्यरत् आले अण्डर एसएलसी हुन् । तर, लगाव, निरन्तरको मेहनत र न्यूनतम स्रोतको प्रयोगबाट मोटरसाइकल बनाएका रहेछन् । त्यस दिनबाट डीआईजी सुब्बा आफू मातहत अधिकृतहरुलाई भन्ने गर्छन्, ‘तपाईंहरुले जागिर खानु भयो, उसले काम देखायो ।
← चन्द्रमा धनु राशिमा बसेसँगै आजदेखि यी ८ राशि बने मालामाल :कतै तपाइँ त पर्नु भएन ?
बानेश्वरदेखि झापाको चारआली सम्म बैंक हाँक्ने महिला, ग्लोबलमा मात्र १६ शाखा प्रबन्धक →